> Household wear>SLIDING GLASS DOOR CABINET-4 Fts.
Size: W118.5*D40.7*H88 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၁၈.၅၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၈၈ စင်တီမီတာ including2adjustable shelves with extra beam. Loading capability upto 50 kgs per shelf (extra shelf also available for sale) ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ရက်မအပိုတပ်ဆင်ထားသည့် စင် (၂)စင်ပါဝင်ပြီး၊ စင်တစ်စင်လျှင် ၅၀ ကီလိုထက်မနည်းတင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ (သီးသန့်ဝယ်ယူနိုင်သည့် အချပ်ပိုစင်များလည်းရှိပါသည်။)
Dimensions : 1185 x 407 x 880 cm